Jeneraalkii Ugu awoodda badnaa dalka Aljazaa'ir oo si lama filaan ah u dhintay.
Monday December 23, 2019 - 20:34:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Jeneraalkii ugu sarreeyay ciidanka Melleteriga wadanka Al Jazaa'ir ayaa si lama filaan ah ugeeriyooday xilli isbedel dhanka maamulka ah uu dhowaan wadankaas ka xasilay.
Jeneraal Axmed Qaayad Saalix oo ahaa Taliyihii ciidamada qalabka sida iyo wasiirku xigeenkii Difaaca ayaa magaalada caasimadda ah ee Aljazaa'ir ugu geeriyooday cudurka Wadna xanuunka oo kusoo booday.
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Al Jazaa'ir ayaa lagu xaqiijiyay geerida Jeneraalka waxaana lagu dhawaaqay sedax maalmood oo baroor diiq ah, Jeneraalka dhintay oo 79 sana jir ahaa ayaa dhashay sanaddii 1940, wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horreeyay ee ku biiray ciidankii Xureynta Muqaawamada Al Jazaa'ir oo aheyd jabhad ladagaallanka guumeystihii Faransiiska.
Taliyaha dhintay waxay mar aad isugu dhawaayeen Cabdi Caziiz Botafaliiqa madaxweynihii horse balse labadii sanadood ee lasoo dhaafay ayuu sii xumaanayay xiriirka udhaxeeya, bilaawgii sanadkaan markii ay kacdoonnada shacbiga ah wadanka ka bilaawdeen wuxuu Jeneraal Axmed Saalix lasoo baxay siyaasad isbedel doon ah.
Warbaahinta Al Jazaa'ir ayaa ninkan calmaaniga ah ku tilmaamtay Ninkii ugu awoodda badnaa wadanka, geerida Jeneraalkan waxay imaanaysaa maalmo yar kadib markii madaxweyne rayid ah ay yeelatay dowladda Al Jazaa'ir islamarkaana la maxkamadeeyay hoggaamiyaashii nidaamkii hore.